(၂၄-၆-၂၀၁၉) ရက်နေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးမှာ (၃၂၃၈) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ယူနစ်မှာ (၇၀၃၃၂.၃) မဂ္ဂါဝပ်နာရီဖြစ်ပါသည်။ ၂၆.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ ၂၅.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်ရောင်းဈေးနှုန်းများ
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်မှ ဘင်းမ်စတက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. M Shahidul Islam နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian LECHERVY တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၆) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်သည် ဘင်းမ်စတက် အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. M Shahidul Islam ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့၊ ၁၅:၀၀ နာရီအချိန်တွင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် BIMSTEC Energy Centre (BEC) အတွက် ရန်ပုံငွေနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သော BIMSTEC Grid Interconnection ဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ လျှပ်စစ်ကွန်ရက်နည်းပညာများ၊ အစီအမံများ၊ စနစ်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးနှင့် အခက်အခဲများကျော်လွှားနိုင်ရန် စွမ်းအင်ကဏ္ဍဦးဆောင်နိုင်ငံဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် BIMSTEC Grid Interconnection Committee (BGICC) နှင့်အတူ နည်းလမ်းများရှာဖွေရန် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ၁၆:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian LECHERVY နှင့်တွေ့ဆုံရာ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ သံအမတ်ကြီးအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံရေးအရသာမက စီးပွားရေးအရပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ကဏ္ဍတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကဏ္ဍများကို အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲများသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင်နှင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
- လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) (၂၂ / ၂၀၁၉)
- လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း (၁၄.၆.၂၀၁၉ )